Puntlandes.com | Archive | Maqaallo | 2
Home » Archives by category » Maqaallo (Page 2)
31 December, 2014 Comments Off on Yuusuf Garaad ”Cadaado ma mid gado midna lacag la’aan ku qaado ayey rabtaa? Ha caddeyso Cadaado haddii ujeeddadeedu ay tahay in ay caasimad noqoto”
Gobollada Dhexe maxay Dowlad u dhisan kari la’yihiin? Degmooyinka iyo siyaasiyiinta hor boodayaa maxay guul u yaqaannaan? Dantoodu ma in ay helaan baa waxa ay doonayaan? Mise dantoodu waxay ku jirtaa in ay is-hor taagaan waxa ay kuwa kale doonayaan? Erayadeydu waxay ku socdaan labada degmo ee Dhuusa Marreeb iyo Cadaado. Waxaa hore loo go’aamiyay […]
Daawo Video–Sawiro: Xasan Yusuf Dhuux oo Abaalmarin caalami ah la gudoonsiiyey
23 September, 2014 Comments Off on Daawo Video–Sawiro: Xasan Yusuf Dhuux oo Abaalmarin caalami ah la gudoonsiiyey
Melbourne (Pes): Xasan Yusuf Dhuux ayaa Abaalmarin caalami ah la gudoonsiiyey waxaa lagu gudoonsiiyey Gobolka Victoria ee dalka Australia. Xaflada lagu bixinayey Abaalmainta Caalamiga ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirada Gobolka Victoria ee dalka Australia oo uu hogaaminayo madaxa Gobolka Victoria, waxaa kaloo ka soo qaybgalay madaxa Poliska Gobolka waxaana halkaas lagu abaalamariyey dadkii […]
19 September, 2014 Comments Off on Soomaalinimadda ma aaminsani laakiin Puntlandnimada waan aaminsanahay
Magacaygu waa Ayaan Dhangad. Waxaan dhashay xilyadii bur burkiii Soomaliya. Waxaan ku dhashay Gobalka Nugaal. Wax dowlad nimo sheegaya ilaaa aan ka soo gaaray 7 sano ma”arkin.M madaxweynihii ugu horeeyey ee aan arko wuxuu ahaaa Abdulaahi Yusuf Ahmad illahay janadii ha geeyee. Waxaan ku caqliyeystay maamulka Puntland oo jira. Waxaaan ku noolahay amni, nabad iyo […]